INingizimu Afrika ihlonipha uRebecca
UMENGAMELI wezwe uMnuz Cyril Ramaphosa, enikeza uDkt Rebecca Malope, indondo yesiliva yokumhlonipha ngenxa yamagalelo akhe ekuthuthukiseni abantu eNingizimu Afrika, nokwakha ubumbano ngomculo Isithombe: FACEBOOK
Bongiwe Zuma | November 18, 2021
KUHLONISHWE izikhakha zamaciko adlala indima enkulu emculweni wakuleli, okubalwa nesihlabane somculo wokholo esesineminyaka siyibambile, uDkt Rebecca Malope.
Uhlonishwe ngendondo kumaNational Orders awards, aqhakambisa amagalelo amaciko abambe iqhaza ekusebenziseni ubuciko ukwenza iNingizimu Afrika, ibengcono nokuhlanganisa abantu.
URebecca uhlonishwe ngendondo ye-The Order of Ikhamanga yesiliva ngumengameli wakuleli, uMnuz Cyril Ramaphosa.
Le ngqalabutho emculweni wokholo ithe kusho lukhulu okwenzeka namhlanje ngoba kuchaza ukuthi imisebenzi yayo iyabonakala.
" Ngihlonishwa ezweni lami, lokho kusho lukhulu kimi. Kusho ukuthi imisebenzi yami engiyenze yonke le minyaka iyabonakala. Imisebenzi esengiyenze iminyaka ewu-33. Namhlanje ngithola indondo ekade ngiyilindele," kusho uRebecca.
Ngaphandle kwakhe kukhona nezinye izinkakha zamaciko ezizohlomulile. Umcimbi bewuhanjelwe yizikhulu ezahlukene okubalwa noNgqongqoshe woMnyango wezobuCiko, amaSiko nezeMidlalo kuleli uMnuz Nathi Mthethwa.